မြန်မာမွတ်စလင်အကြောင်းတစေ့တစောင်း | Lumyo Chit
(၁) ရိုဟင်ဂျာ Ro Hingya လူမျိုး
သမိုင်းကြောင်းအရ တည်ငြိမ်စွာဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင် နရမိတ်လှ လက်ထက်ဝန်ကြီးရာထူး၊ စစ်တပ်၊ ရေတပ်၊ ဗိုလ်မှူးရာထူး များ၌ လည်းကောင်း ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အစုအဝေးလူမျိုးစုပင်ဖြစ်သည်။
မွတ်စလင်မ်စာဆိုတော် စိုင်ယက်ဒ်ရှားအာလ်ဝါလ် (Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စန္ဒသူဓမ္မဘုရင်၏ နန်းရင်းဝန် ]`မာဂန်´မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဖြစ်သကဲ့သို့ ဆိုင်ယက်မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂျာဟစ် (Mujaehi နှင့် ဆုလေမန် (Sulaiman)တို့မှာ ရခိုင်နန်းရင်းဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြပြီး အရှရက်ဖ်ခန် (Asharaf Khan) မှာ စန္ဒသုဓမ္မ ဘုရင်၏ စစ်သူကြီးဖြစ်ကြောင်း။
၁။ MKရာမန်-ရ၂။ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ မောင်သံလွင်၏ ရိုဝန်ညာလူမျိုးများ။
မဇ္စိုမဒေသ အန္ဒိယတိုက်၏ အရှေ့ဘက်ဒေသနေထိုင်သူများကို အနောက်ဘက်ဒေသအခေါ် အဝေါ်ဖြင့် ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းသားဟု ခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ ရခိုင်တောင်ပိုင်းသားတို့ကလည်း ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင်ညာ ခေါ်ဆိုကြရာမှ ရိုဟင်ညာ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်လာသည်။ “ဘင်္ဂါလီဒေသ၏ အရှေ့ကမ်းရှိ လူ့အစုအဝေး´´ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အချို့က ရွာဟောင်းနေထိုင်ကြသည့် ကျားကဲ့သို့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိသည့် လူမျိုး၊ ရွာဟောင်းမှကျား၊ ရွာဟိန်းကျားမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု ကောက်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအား ၁၉၅၄-ခု၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်၊ ည(၈)နာရီ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု၏ အသံလွှင့်မ်ိန့်ခွန်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသကဲ့သို့ ၁၉၆၁-ခု၊ မေလ(၁၅) ရက်မှစတင်ကာ တပတ်(၃)ကြိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာဖြင့် မြန်မာ့အသံမှ အသံလွှင့်ပေးခဲ့သည်။
၁။ဦးကျော်ငြိမ်း၊ မာတလိ၊ နှစ်၃၀ မြန်မာ့အသံ၊ စာမျက်နှာ-၇၁ခိုင်နှင့် မြန်မာပြည်ရှိ မွတ်စလင်မ်လူမျိုးများ ရာဇ၀င်။
အင်ဒိုအာယိယာန်နှင့် မွန်ဂိုဂျွိုက်တို့မှာဟိမ၀န္တာတောင်၏တောင်ဖက် ကမ္မရုပဒေသ မာဂဒတိုင်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းဒေသဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားနယ်၊ အရှေ့မြောက်ဒေသမှ ရခုင်ပြည်ရောက်ရှိက အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့သည်။
1.E.B.Harell; The History of Aryan Rule in India.page 34.
2.S.K.Chatterji;Ki-Ar-A-yana-Krit. page 22.
ကမန်လေးလံကိုင် သူရဲကောင်းဟု ပါရှင်းစကားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်မှုကို ရခိုင်မူပြု၍ ခေါ်ဆိုပညတ်ထားသည်။
မူလက ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်ရာမှ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ထိတွေ့ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ခဲ့ရာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။
ရခုင်ဘုရင်မင်းဘာကြီး(ခ)မင်းဘင်ကြီး(ခ)သီရိသူရိယာစန္ဒမဟာဓမ္မရာဇာ၊ ဇဘာရ်ရှား(1531-1553) လက်ထက် ဘင်္ဂလားကြည်းကြောင်း၊ ရေကြောင်းချီတက်ရာတွင် ကမန်လေးကိုင် သူရဲကောင်း (၅၀ ၀၀၀) ငါးသောင်းကျော်တို့မှာ လေး၊ လှံ၊ သိုင်း၊ ဓါး၊ သူရဲကောင်းတပ်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြထားသည်။
၂။ ဦးလှထွန်းဖြူ-ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ- စာမျက်နှာ-၄၇
ကမန်သူရဲကောင်းတပ်တွင် ဘင်္ဂလားဘုရင် ဒေါ့ဒါအုပ်၏ အရေးနိမ့်ခဲ့သည့် စစ်သည်များ (၁၅၇၆) နှင့် မဂိုဘုရင် Shah Jahan ၏ သားတော် ရှာရူဂျာ ဘုရင်တပ်မှ စစ်သည်များ (၁၆၃၉) မှ တပ်သားများ၊ ဘာသာရေးအခြေခံတူညီမှုအပေါ် ကမန်သူရဲကောင်းတပ်တွင် ဖြည့်တင်းပေးခဲ့သည်။
ကမန်လူမျိုးတို့၏ H Civil Society လူယဉ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် နိုင်ငံတော်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
၃)ပန်းသိဃ်-ပန်းသေး Panthay လူမျိုး
ပုဂံကျောက်စာ အနန္တသူ(လေးမျက်နှာဘုရား) အိမ်တော်ရာကျောက်စာ၊ ညောင်းရမ်းကြီးသမီး တောင်ဘက်မျက်နှာကျောက်စာ၊ ပုဂံဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကျောက်စာ တို့တွင် ဖော်ပြချက်အရ ပုဂံခေတ်ကပင် ကုန်သည်တော်၊ အမြောက်တပ်အမှုထမ်းများအဖြေစ်နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
တရုတ်ပြေးမင်းလက်ထက်၌ တာတာတို့ မြန်မာပြည်သို့ ၀င်ရောက်ထိုက်ခိုက်ရာ ယူနန်ပြည်နယ်မှ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်များ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နန်ပေါ့၇ွာသို့ ပန်းသေးများ စုစည်းမိရာ ပန်လုံဟု ပညတ်ခဲ့သည်။ မင်းခေါင်ကြီး (အေဒီ-၁၄၀၁-၁၄၂၂) သားတော် မင်းရဲကျော်စွာ ပုသိမ်မြို့သိမ်းယူရာ ပန်းသေးတို့က ရွှေ၊ငွေ၊ပုဆိုးသက္ကလပ်၊ ပရပတ်၊ နီပါးဆက်ကြ၏။
၁။ BaShin; Coming of Islam
၂။ ဦးယူစွတ်-ပန်းလုံ ပန်းသေးအမျိုးသားသမိုင်း
၃။ W.S.De Saj; History of the British Residency in Burma. Page-154.
၄။ မြန်မာမင်းများ အရေးတော်ပုံ၊ စာမျက်နှာ- ၂၉၈
မင်မင်းဆက်၏ ယုန်လီ၏ နောက်လိုက်အကြီးအကဲနှစ်ဦးတွင် တိုက်ခွန့်ခွန့်မှာမှာ ပန်းသေးဖြစ်၍ ချဲန်ရှမ်းတုန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် သင့်မြတ်စွာယှဉ်တွဲလျက် တုက်ခွန့်ခွန့်(တိုက်ခုံခုံ)မှာ ကိုးကန့်ဒေသနမ့်ဟန်မော်အရပ် အခြေပြုနေထိုင်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် “မာ´´ အုပ်စုလူမျိုးအကြီးအကဲမှ ဆက်လက်စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၈၆၀ တွင် အကြီးအကဲ မာလင်ယွီ(၁၉၃၄-၃၅)တွင် မာမေတင်၊ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ခံပြီး၊ ၀နယ်ကွမ်ပြယ်စော်ဘွား ၏ သမီးနှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလ ပန်လုံလူငယ်များအား ခေါင်းဆောင် မာကွမ်းကွေ့ ဥိးဆောင်တိုက်ခိုက်သကဲ့သို့ မာမေတင်က မြန်မာတို့ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ပန်လုံမြို့ကို မြန်မာနယ်မြေပိုင်နက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ပသီလူမျိုးတို့မှ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကာလကပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ မန်ချုးမှတ်တမ်းနှင့် မှန်နန်းရာဇ၀င်နှင့် ကုန်းဘောင် ဆက်မဟာရာဇ၀င်များ တွင် ပါရှိသည်။
အေဒီ ၁၂၂၁-ခု၊ အနော်ရထာမင်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် ပုဂံနေပြည်တော် ယိမ်းယိုင်လာ၍ နိုင်ငံတော်ရေပိုက်နက်လုံခြုံရေးနှငင့် ကာကါယ်ရေးတာဝန်ဆောင်ရွက်နေရသည့် ပသီတပ်မှ၊ မိမိတို့ကြမ္မာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာကာ ပုသိမ်ဟု ခေါ်မည့်ဒေသတွင် ပသီမြို့ပြနိုင်ငံ ပသီမင်းဆက်(၃)ဆက်၊(၁၂)နှစ်တိုင်တိုင် တည်ထောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၀ိဋဋူပနှင့် သာကီဝင်တို့ မသင့်မတင့်ဖြစ်၍ စစ်ခင်းကြသည်တွင် သာကီဝင် ဓဇရာဇာမင်း၊ မဇ္ဈိမဒေသမှ စွန့်ခွာလာသကဲ့သို့ တပ်မှူး၊ ဗိုလ်မှူး၊ ၀န်ကြီး၊ ပညာရှိတပ်သား မကျန် နန်းမျိုးနွယ် (၃၇၀၀) တို့အစုခွဲကာ အင်းဝဘုရင် စနေမင်းထံ သစ္စာနှံကာ ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။
တောင်ငူ၊ ရမည်းသင်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ၊ စည်သာ၊ ဒီပဲယင်း၊ ညောင်းရမ်း၊ ပင်းတလဲ၊ တဘက်ဆွဲ၊ ဘောဓိ၊ စည်ပုတ္တရာ၊ မြေထူး တွင် အစုခွဲနေထိုင်သူတို့မှာ မင်းမှုထမ်းရင်း အမြှောက်တပ်၊ သေနတ်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ကိုယ်ရံတော်တပ်၊ ကင်းတားကုလားပျိုတပ်၊ စာဆိုများ ကုန်သည်တော်များအဖြစ် အမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသည်။
၁။ ဆရာမာဃ-ပုသိမ်ရာဇ၀င်၊ စာမျက်နှာ-၁၃၇
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Rocial Gene မူလလူမျိုးနွယ်ရင် Primitive Man ရှေးကျသော လူများဖြစ်၍ မြန်မာစာပေလောကတွင် ဘီလူးဟု ပညတ်ပြီး ရက္ခပူရတိုင်းသား ရေဘီလူးဟု ဓမ္မစေတီကျောက်စာ၊ မွန်တို့၏ ကလျာဏီကျောက်စာတို့တွင် ရေးထိုးထားသည်။
သမိုင်းသုတေသီများလေ့လာရာတွင် ပသျှူးလူမျိုး+ဆလုံ လူမျိုးတို့မှ Australied သြစတြီးလွိုက်လူမျိုးတို့၏ အသွင်အပြင်လက္ခဏာ ယဉ်ကျေးမှု အကြွင်းအကျန်များတွေ့ရပြီး ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး၊ အရည်အချင်းရှိပြီး ရိုးသားမှုအပြည့်အ၀ရှိကြောင်း မှတ်ချက်ချကြသည်။
မွန်ခမာ၊ တိဗက်တို့အား မင်းတို့အင်အားမလွန်ဆန်နိုင်၍ သဘာသတရားအရ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကျွန်းများသိုပပင် အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ Historical life သမိုင်းဖြစ်စဉ်အရ ကော့သေ ကျွန်းဒေသများသို့ အခြေစိုက်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ဆလုံဟု နတ်ကိုးကွယ်သူများကို ပညတ်ခေါ်ဆိုပြီး အစ္စလာမ်သာသနာ အငွေ့အသက်ရရှိပြီး လက်ခံကျင့်သုံးသူများကို ပသျှူးဟု ပညတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ပသျှူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ ခံယူချက်မှာ “မိမိတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကါယ်ရန်မှာ မိမိတို့တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း´´ အဆင့်ဆင့်သော ဘ၀ပေး အသိက တပ်လှန့်ထားသည်။
၁။ ကွင်းဆင်းသုတေသနမှတ်တမ်း (Field Work, 1982)
၂။ ကမ္ဘာလှည့်သူတေသီ အိဗနေဘတူတာ (Ibni Batuata) မှတ်တမ်း၊ အေဒီ ၁၃၄၅
←7– ဒေါက်တာ ရှိတ်အပ္ပဒူ ရာမန် [၁၈၇ဝ – ၁၉၁၆]
လူမျိုး ၁၀၁ ပါး →